Maamul goboleedka Galmudug oo doortay Madaxweyne cusub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaamul goboleedka Galmudug oo doortay Madaxweyne cusub
May 3, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf. [Sawirka: Archive]
Cadaado-(Puntland Mirror) Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta oo Arbaco ah doortay Madaxweyne.
Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa loo doortay Madaxweynaha cusub ee Galmudug.
Xaaf ayaa helay 53 cod halka musharixii la loolamayay Axmed Shariif Cali Hilowle uu helay 35 cod intii lagu guda jiray wareega labaad ee codaynta.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casiir ayaa ku dhawaaqay in Axmed Ducaale Geele Xaaf uu ku guuleystay doorashada.
Isaga oo ka hadlayay munaasabada doorashada, Madaxweynaha cusub ayaa balanqaaday in uu wax badan ka qaban doono amni darada ka jirta deegaanada Galmudug iyo in uu hagaajin doono xiriirka maamulada dariska la ah.
Xafaa ayaa muddo dhan 16-sanno ahaa xildhibaan katirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waana ganacsade isaga oo asaasay shirkada duulimaadyada Daalo Airline.
Madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dhawaan jagada iska casilay kadib xaalad caafimaad oo lasoo daristay.
September 16, 2017 Maxamed Cabdi Waare oo ku guuleystay madaxweynaha Hir-Shabelle
December 26, 2016 Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay dilkii xeer ilaaliyihii ciidamada
Markab dagaal oo Spain leedahay oo burburshay dooni burcadbadeed
Muqdisho-(Puntland Mirror) Markab dagaal oo Spain leedahay oo katirsan ciidamada badda ee Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa burburshay dooni burcadbadeed, sida wasaaradda arrimaha dibada Spain ay bayaan ku sheegtay Isniintii. Kuma aysan [...]
Xoghayaha Difaaca Mareykanka: Weerarka Waqooyiga Kuuriya wuxuu keeni doonaa dagaal
Washington-(Puntland Mirror) Xoghayaha Difaaca Mareykanka James Mattis ayaa shalay oo Isniin ahayd sheegay haddii Waqooyiga Kuuriya ay weerarto Mareykanka, taasi in ay keeni doonto dagaal. “Haddii ay gantaal ku soo ridaan Mareykanka, taasi waxay hurin [...]